Mapakeji muSnap fomati yandinoda uye yandinokurudzira | Linux Vakapindwa muropa
Mapakeji muSnap fomati yandinoda uye yandinokurudzira
Ini ndinoreurura, ndinoda Snap mapaketi. Iyo inzira inokurumidza yekumisikidza, kuyedza, uye kubvisa zvirongwa. Izvo zvinondiyeuchidzawo nezve chaimbove chakanakisa cheUbuntu, kugovera kwaisatya kuedza zvinhu zvitsva zvisinei nekuti vamwe vemunharaunda yeLinux vaifungei. Chokwadi, izvi zvakavepo Shuttleworth isati yarasikirwa nechido mumusika wepamusha uye Ubuntu akatanga morphing muchikwata cheFedora asi zvichibva kunaDebian.
Asi, sekuda kwandinofarira Snap, ndinovenga posvo mazita anoti anondiudza zvekuita. Ini ndinoreva kune mhando "Zvirongwa zvausingakwanise kupotsa" kana "Kugoverwa kwaunofanirwa kuisa." Naizvozvo, iyi posvo haikuudze kuti uite chero chinhu. Kana iwe uchida, iwe unogona kuyedza zvirongwa izvi uye kuzviudza iwe zvaunofunga. Uye, kana usiri kuda, kwete.
1 Mapakeji muSnap fomati. Mamwe mazano
Mapakeji muSnap fomati. Mamwe mazano
OBS Studio ndiyo chirongwa kana iwe uchida kuyerera pane masevhisi seTwitch, Facebook Live kana Youtube. Iwe unogona zvakare kuishandisa kugadzira uye kugadzirisa vhidhiyo kubva kwakasiyana masosi. Mune ino kesi isu tine chimwe chinhu chinopfuura pasuru mune imwe fomati kubvira ivo vanogadzira vakabatanidza maficha asingawanikwe mushanduro dze default.
Zvimwe zvezvinhu zvacho ndezvi:
Tsigiro yekukurumidza kukodha vhidhiyo paNvidia, AMD, uye Intel.
Plugin yekuchinja kwechiitiko otomatiki.
Plugin yekurekodha mawebhusaiti.
Plugin yekutsvaga midhiya yakachengetwa pane diski.
Screensaver mugadziri we DVD.
Shandisa DSLR kamera mifananidzo uchishandisa gPhoto.
Shandisa Gstreamer kukodha mavhidhiyo.
Kugona kufambisa nhumbi panguva yekuchinja pakati pezviitiko.
Kugona kudzokorora kutamba kwesosi mukufamba zvishoma.
Virtual kamera rutsigiro.
En peji yeiyo purojekiti muchitoro cheSpap pane mimwe mirayiridzo yekumisikidza.
Haasi munhu wese ari fan weiyo Brave browser mushure meiyo faux pas pavakaisa chinongedzo pasina mvumo. asi, icho chaicho chikuru browser ine zvakawanda zvakavanzika sarudzo uye, iri kutsvaga nzira yekuita izvo zvinodiwa zvee zvemukati vagadziri vane kodzero yekufamba pasina kupindira kubva kune vashandisi veInternet.
Neimwe chikonzero, Akashinga anga asina nzira yakapusa yekuisa paLinux, asi ichangobva kuwanikwa zvakare pa chitoro.
Panguva ino mumutambo, kukurudzira Skype kunogona kuita sekurumbidza MSN Messenger. Mushure mezvose, avo vasiri kushandisa WhatsAPP vanotaurirana neTeregiramu kana Signal. Zvisinei, YeMicrosoft vhidhiyo yekufona uye yekutaura mutengi inoenderera ichiva nenzvimbo yayo pasi.
Ini nguva pfupi yadarika ndakarasikirwa nekuwana yangu account yeAmazon. Komputa yakafunga kuti kwaive nebasa rekufungidzira uye yaida kuti ndisimbise hunhu hwangu nekudzvanya chinongedzo chavakatumira kufoni yangu. Dambudziko nderekuti ini ndakanga ndisisakwanise kuwana iyo nhamba. Imwe chete nzira yaive yekufonera iyo US kuti isimbise hunhu hwangu.
Panguva iyoyo ini ndanga ndichibhadhara kunyoreswa kweMicrosoft kwaisanganisira maminetsi akati wandei kufona nhare kubva kuSkype, saka ndakafunga kuisa kunyorera.
Ndakanga ndisati ndashandisa Skype mumakore, uye ndakashamisika ne kurira kwemhando uye nyore kwekutaurirana. Uye zvakare, kugona kwayo kumisikidza mapoka eChat uye kufonera vhidhiyos haina chinhu chekugodora mafashoni ekushandisa.
Kana iwe uchikwanisa kuwana vako vokukurukura kuti uiise, unogona kurodha pasi Skype kubva pano.
Handizive kana zvichikonzerwa nezera kana kushushikana, asi ndangariro dzangu hadzisi izvo zvazvaive. Ini ndauya kuzokanganwa pini yemushandi pakarepo mushure mekuichinja. Ngatiregei kutaura nezve kudiwa kwekurangarira mapassword akaomarara anokurudzirwa nenyanzvi dzekuchengetedza komputa.
Muchokwadi, ndakave nenguva isingafadzi apo anoshanda weAmazon akandikumbira kutumidza zvimwe zvezvandakatenga kuti ndiwanezve mukana. Neraki ndakarangarira nekufungidzira mamwe mazita. Ini ndakabva ndafunga kuisa KeePassXC.
Chirongwa ichi inopfuura yakawanda multiplatform password password (Windows, Mac neLinux) sezvo ichibvumidza kuchengetedza mune yakavharidzirwa fomu mapassword, mazita evashandisi, zvinongedzo, zvinyorwa uye zvinyorwa.
Iyo purogiramu inokutendera iwe kuti ugadzire mapassword uye ubatanidzwe pamwe neiyo Chrome neFirefox mabhurawuza.
Kana iwe uchida kupa kurudziro nezve ako aunofarira Snap mapakeji, iwe unogona kuwana iyo yekutaura fomu pazasi. Ndichafarira kukuverengera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Mapakeji muSnap fomati yandinoda uye yandinokurudzira
Zvakanaka, kusiyana newe, yangu ndiwo akasimba distros, kunyanya Debian Akagadzika uye iyo isina basa CentOS. Nekudaro, ini ndinowanzo shandisa P2P network, uye iyo Debian 9 vhezheni yeQbittorrent haina nzira dzemazuva ano dzekutsvagisa torrent, saka snap package inogadzirisa dambudziko kwandiri. Inoshanda zvakakwana; chandisingade ndechekuti inononoka (Laptop yangu haina SSD)
Wakaedza here kuisa iyo Deb package iyo inotorwa kubva pawebhusaiti yavo?
Ini ndaigona kuisa snap paPuppy Linux, kuisa Brave, asi zvinonzwika zvakashata kwandiri kuti bhurawuza iri rakavakirwa paChromium, dai zvaive zvakanyanya seFirefox zvirinani ndaizoda kuziva.
famba zvakanaka akadaro
Tora mapakeji, sekutaura kwavo, zvakanaka. Vakagadzirisa zvakanyanya kubva pakutanga, kekutanga iwe paunomisa iyo inotanga zvishoma zvishoma, asi kekutanga chete nguva.
Ini, zvese nezvimwe, zvichidaro handizvishandise. Asi ini ndinoshandisa imwe kana imwe, izvozvi handitomboziva kuti ndeipi, ini ndinoshandisawo imwe flatpak, ini handina basa, ndinotsvaga nyaradzo, ndosaka ndichishandisa, pamusoro pezvose, solid distros, kunyangwe iri pakati peyakagadzikana izvi izvi zvinofanirwa kunge zvichiedza, ehe, chero Chero zvavanotaura, zvakatsiga, kwete, zvinotevera, zvakadzikama.
Snap uye flatpak zvakanaka chero zvavanotaura.
Kutiza Simulator: iyo Alpha inosunungurwa yeLinux
Nei injini-yekumhanyisa injini yekutsvaga isiri iyo pfungwa inogoneka